Ungayenza kanjani i-ILS ukufika FSX nge-PA380
Umbuzo Ungayenza kanjani i-ILS ukufika FSX nge-PA380
iminyaka 2 7 izinyanga ezedlule #480 by JanneAir15
Sawubona! Ngakho-ke ngithanda ukwazi ukuthi kungenza kanjani ukuthi i-ILS ifike FSX nge-Project Airbus A380. Sengivele ngazi ukuthi kungenziwa kanjani ukuthi i-ILS ifike kwezinye izindiza kodwa ngenxa yokuthi iProjekthi Airbus cockpit ihluke kakhulu angiqiniseki. Ngizamile ukwenza ukufika kwe-ILS ngale ndiza kodwa akuphumanga. Ngendlela ebengikulo ku-cockpit ebonakalayo. Ngabe kukhona izinkinobho ezihlukile? Futhi indiza yi-Air France A380 VC evela kulesi siza. Ngiyacela ungisize ngalokhu.
iminyaka 2 7 izinyanga ezedlule #483 by Gh0stRider203
Kuyavunywa, mina ikakhulukazi #FlyBoeing kulezi zinsuku (i-DC-10 futhi Concorde kokuba okukhishiwe ezimbili eziyinhloko lol), kodwa ngiyazi ukuthi kudingeka ukudayela ku-ILS freq ku Nav1, bese ukushintsha kusuka GPS Nav (Ngivame abe hot ukhiye leyo, esimweni wami CTRL SHIFT N). Angikho ukuthi ujwayelene Airbus kodwa ngiyazi phezu 747 (okuyinto yikho engikwenza ikakhulu fly cuz kwenza $ kakhulu), une ukukhetha APP (indlela) ukuze uthole it ukukhiya kuya ILS. Ngeke ukukhiya ukuba eyehlelayo glide, ngakho mina Okumelwe ukwenze ukuthi ngesandla, kodwa lokho kumane nje kuyindaba yokukhathalelwa ngokulungisa ijubane Vert.
Ngiyethemba ukuthi lokhu kusiza! NGIKUFISELA INHLANHLA!